कोमामा छन् किम जोङ : पहिला सार्वजनिक भएको फोटो ‘फेक’, सम्हालिन् बहिनीले सत्ता ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/कोमामा छन् किम जोङ : पहिला सार्वजनिक भएको फोटो ‘फेक’, सम्हालिन् बहिनीले सत्ता !
काठमाडौं । अहिले उत्तर कोरियाली तानाशाह किम जोङ उनको स्वास्थ्यबारे पुनः एकपटक चर्चा भइरहेको छ । दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति किम डे–जंगका अधिकारी भईसकेका पूर्व कूटनीतिक चाङ्ग सोङ्–मिनले किम जोंग उन कोमामा भएको दाबी गरेका छन् । यो खबर उत्तर कोरियाली तानाशाह किमले बहिनी किम यो जोंगलाई केहि दिन अगाडि अमेरिका र दक्षिण कोरियासँग सम्बन्ध स्थापित गर्न दिएको खबर पछि भाइरल बनिरहेको हो ।
केहि महिना अगाडि अचानक उनको बारेमा विभिन्न अड्कलबाजीहरु भएका थिए । तर त्यसलाई असत्य साबित गदै किम एक सार्वजनिक कार्यक्रममा रिबन काट्दै देखा परेका थिए । अहिले दक्षिण कोरियाका पूर्व कूटनीतिज्ञले उत्तर कोरियाली तानाशाह किम कोमामा रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
त्यसपछि उनको स्वास्थ्यबारे फेरि एकपटक चर्चा शुरु भएको छ । डेली मेलमा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार स्थानीय मिडियासँग कुराकानी गर्दै दक्षिण कोरियाका पूर्व कूटनीतिज्ञले किम जोंग उन कोमामा भएको तर उनको जीवन अन्त्य भने नभएको बताएका हुन् ।उनका अनुसार अहिले किमका ३३ वर्षीया बहिनी किम यो–जोंग दाइका केही शक्तिसहित सर्वोच्च पदमा रहेकी छिन् ।एजेन्सीको सहयोगमा